Umshado – The Ulwazi Programme
Ulwazi Programme lwabhala ngokubongela ngonyaka ka-2015, bheka kule-link uma ufuna ukufunda kabanzi. Kule-video engezansi, sibona imbongi ibongela abashadikazi osukwini lwabo lomshado. Inkondlo yembongi: Inamandla! Yabona kukuhle ukuthi indoda ibe nomsizi wayo, Ngalawa maringi lawa, kunezivumelwano ezinhle. Yebo yaqala impilo entsha, Yajabula eyakwethu. Zagiya ezakwaShange zathi, umakoti ungowethu, Uzosiwashela asiphekele! Konke okuhlanganiswe nguNkulunkulu kuhle Futhi akunakuhlukaniswa … Read more
Categories Culture Tags imbongi, inkondlo, Umshado
Lapha sizobheka ukuthi umabo kanye nomshado omkhulu kumele uphumele kuphi. Abantu baKwaZulu izinto zesintu kanye namasiko ethu bawenze ngenye indlela ongaze udideke uma ungesiye owakhona. Omunye umuntu okhule ewazi amasiko ngendlela ayenziwa ngayo kodwa manje abantu indlela abawenza ngayo sebazishintsha izinto abantu ababenza ngayo uma benza izinto eziphathelene nokushada. Kodwa indaba ivamise ukuthi yonakale ngenkathi … Read more